Ra'iisal Wasaaraha oo weeraray Guddoomiyaha Baarlamaanka - BBC News Somali
Ra'iisal Wasaaraha oo weeraray Guddoomiyaha Baarlamaanka
7 Juunyo 2011
Image caption Raiisal Wasaaraha Somaaliya Maxamed Cabdullaahi
Raiisal Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi, ayaa tashwiish ku furay wadahadallada Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka uga socda magaalada kampala, ee ku saabsan sidii loo soo af jari lahaa khilaafka Madaxda iyo Hey'adaha Qaranka.
Raiisal Wasaarauhu wuxuu si gooniya eedeyn kulul dusha uga tuuray Guddoomiyaha Baarlamaanka, Shariif Xasan Shiikh Aden, oo uu ku tilmaamay in uu ku daneysanayo jagadiisa.
Wuxuu ku tilmaamay in uu hadda gorgortan ugu jiro in xildhibaanno hore Wasiirro u ahaan jiray oo isaga la socda lagu soo daro xukuumadda.
Raggaas ayuu ku tilmaamay in ay qeyb ka yihiin waxyaabaha ay Xukuumaddiisu hadda xallineyso.
Ugu dambeyntii wuxuu ku tilmaamay in haddii Kampala ay ka soo baxaan go'aammo wax u dhimaya guulaha ay xukuumaddiisu gaartay in uusan aqbali doonin ee uu, waa sida uu hadalka u dhigaye, talada ku celin doono shacabka Soomaaliyeed.
Guddoomiyuhu wuxuu Baarlamaanka ku tilmaamay in intiisa badan ay yihiin xubnihiisu dad wanaagsan laakiin uu Guddoomiyuhu doonayo in uu ku daneysto.
Arrintani waxay ka duwan tahay sidii uu hadda ka hor uga hadlay Baarlamaanka markii uu New York kula hadlayay Golaha Ammaanka, markaas oo uu ku tilmaamay in Baarlamaank Soomaaliya dhaqankiisu yahay mid aan la aqbali karin.
Ra'iisal Wasaaraha waxaa ka muuqata in uu ka careysan yahay, waxyaabaha ay isla soo qaadeen Guddoomiayaha Baarlamaanka iyo Madaxweynuhu ee ku saabsan aayaha Xukuumaddiisa.
Ma aha sir qarsoon in labada Shariif oo hore saaxiib siyaasadeed u ahaan jiray ay waxaayaha ay isla gorfeeyeen ay ka mid tahay in Xukuumad cusub la soo dhiso iyo in kale.
Si kastaba ha ahaatee, hadallada Ra'iisal Wasaaruhu, haddayba hore u jirtay waxay hadda meesha ka saarayaan wada shaqayn daacad ah oo dhex marta isaga iyo Guddoomiayaha Baarlamaanka.